‘म भन्दिनँ तर प्रधानमन्त्री सर्वोच्चले संसद् विघटनको पक्षमा निर्णय गर्नेमा २ सय प्रतिशत विश्‍वस्त हुनुहुन्छ’ – Nepali Taja Khabar
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङले नेपाली जनताले निर्वाचनका पक्षमा फैसला गरिसकेको बताएका छन् । विराटनगरमा आयोजित आमसभामा सम्बोधन गर्दै संविधानसभा अध्यक्षसमेत रहेका नेता नेम्वाङले सडकमा उत्रिएर जनताले निर्वाचनको पक्षमा फैसला सुनाइसकेको बताएका हुन् ।
‘नेपाली जनताले त अहिले सडकमा उत्रिएर यो समुद्रको लहरजस्तो जनताको जुन लहर सडकमा पोखिएको छ। नेपाली जनताले त फैसला सुनाइसकेका छन्। सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला हामी कुरिरहेका छौं’, उनले भने।
अदालतका सहयोगी भनेर चिनिने एमिकस क्युरीले पनि आफ्नो धारणा राखिसकेको उल्लेख गर्दै अदालतले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन सदर गर्ने कुरामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विश्वस्त रहेको नेम्वाङले बताए।
सम्बोधनका क्रममा नेम्वाङले भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानबमोजिम छ कि छैन भन्नेमा विभिन्न तर्क उठे। ‘यो संविधानसम्मत छ कि छैन भनेर मतहरु प्रकट भए। प्रधानमन्त्रीको कदमलाई लिएर राष्ट्रपतिलाई समेत विवादमा तान्ने प्रयास भयो,’ उनले भने, ‘संसद् विघटन ठीक हो कि बेठीक हो भन्नेबारेमा सर्वोच्चमा विभिन्न रीट परे। कतिले यो संविधानसम्मत छैन, संसदीय प्रणालीबमोजिम छैन भनिरहेका छन्।
तर प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ : संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो। म बहुमतको प्रधानमन्त्री दुई तिहाई बहुमतको प्रधानमन्त्री, संसद्मा मेरो बहुमत छ, संसद्मा कसैले आफ्नो विरोध गरेको छैन। संसद्मा मेरो विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव राखिएको छैन।’
प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नपाएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको पनि नेता नेम्वाङले जिकिर गरे। ‘प्रधानमन्त्रीको प्रश्न छ, म दुई तिहाईको प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नपाएपछि मैले के गर्ने? यही ११ गतेदेखि १५ गतेसम्ममा सर्वोच्च अदालतको फैसला आउँछ विज्ञहरु भन्छन्।’ आफू कानुनको विद्यार्थी भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा नबोल्ने बताए। ‘म कानुनको विद्यार्थी हाम्रो संविधानले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसद्मा बहससमेत गर्न पाइँदैन भनेको छ,’ उनले भने।
जनताले निर्वाचनका पक्षमा फैसला गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘तपाईँहरुलाई जिज्ञासा होला, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गतेदेखि १५ गते फैसला हुँदा के गर्ला? तपाईँहरुले त वैशाख १७ गते र २७ गते निर्वाचन हुन्छ भनेर गर्नुपर्छ भनेर फैसला गरिसक्नुभयो। म त कानुनको विद्यार्थी, मचाहिँ भन्दिनँ, मचाहिँ बोल्दिनँ।
तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भनिसक्नु भएको छ संसद् विघटन गर्ने मेरो अधिकार हो। मैले संविधानबमोजिम लोकतान्त्रिक अभ्यासबमोजिम, लोकतन्त्रमा जनताका बीचमा नगएर कहाँ जाने त त्यसो भए। मैले जनताका जाने जे निर्णय गरेँ त्यो निर्णय यताउति हुँदैन भन्नेमा प्रधानमन्त्री विश्वस्त हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू १ सयमा २ सय प्रतिशत विश्वस्त हुनुहुन्छ।’
पुन: आफ्ना कुरा नभन्ने दोहोऱ्याउँदै नेम्वाङले भने, ‘म आफ्नो कुरा भन्दिनँ, अदालतले फैसला गरेको भोलिपल्ट म त्यसबारेमा भन्छु। प्रधानमन्त्री १ सय मा २ सय प्रतिशत संसद् विघटनको निर्णय फिर्ता हुँदैन भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीप्रति मलाई धेरै विश्वास छ। हामीलाई प्रधानमन्त्रीप्रति धेरै विश्वास छ।’
रेशम चौधरीको मुद्दामा : आन्दोलनकारीसँग गृहमन्त्री पनि सडकमा
रत्नपार्कमा स्कूटर चढेका सर्वसाधारणलाई यस्तो गर्ने आन्दोलनकारीले हड्तालका आयोजक माधव नेपाललाई स्कूटीमै डुलाए